Budata Ooniprobe APK maka Android
ooniprobe bụ ngwa nyocha ịntanetị na-enye gị ohere ikpochapụ obi abụọ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ma a na-enyocha weebụsaịtị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chere na ịntanetị na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe.
Ngwa a, nke The Tor Project bipụtara, nke ị nwere ike ibudata nefu na ekwentị gị na mbadamba site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, bụ ihe ngwọta emepụtara iji nakọta ihe akaebe nke ọnọdụ dị ka nyocha ịntanetị na mbelata ịntanetị. Ọ na-agụnye ule dị iche iche na ooniprobe, na nihi ule ndị a, ọ na-egosi gị ma egbochiri saịtị ndị ahụ yana ma njikọ ịntanetị gị ejiri nwayọọ nwayọọ. A na-enyekwa ndị ọrụ ndụmọdụ ka ha ga-esi gbanahụ nyocha a na iji nwayọọ nwayọọ.
Karịsịa na obodo anyị, anyị na-agba akaebe na a na-egbochikarị ịntanetị na ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka mgbasa ozi ghara ịdị irè site nibelata ịntanetị. Daalụ ooniprobe, ị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ma ọ dị.
Mmepụta: The Tor Project